बला त्कारमैत्री कम्युनिस्ट : यौनजन्य काण्डमा फसेका ४ नेताको पद गुम्यो। - Satya Samachar
जिग्री-पाँडेविरु*द्ध प्र*ह*रीमा मिडिया हबको उ*जु*री
नेपालबाट दिल्ली जाँदै गरेको बस लखनउमा दुर्घटना
हिमानी भन्दापनि सुन्दर छिन पारस र हिमानीकी छोरी पूर्णिका हेर्नुहोस् तस्बिरसहित
जि*उँदै भट्टामा हाल्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर्दा काँग्रेसको नैतिकता कहाँ गयो ?
नेकपामा फुट को संकेत : ओलिले धोका दिएपछि प्रचण्ड फाएर
महान विचार बोकेका ट्याक्सी चालक: जसले वृद्धवृद्धा, दृष्टिविहीन र दुखीलाई नि:शुल्क यात्रा गराउँछन्
सक्दो शेयर गरौ – रास्ट्रघातीलाई जेल हालौ – बालुवाटारलाइ आफ्नो नाम गराउनेलाइ देश निकालाको माग गरौ
पोखराको पृथ्वीचोकमा नसोचेको दुर्घटना, प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप (भिडियो)
प्रचण्डका पूर्व अंगरक्षक एसपी मल्लको अफिसमा मदिराका बोतलको खात, हेडक्वाटरले नछोड्ने !
यी हुन् सांसद आलमलाई सिंघम शैलीमा समाउने शाहशी प्रहरी प्रमुख ! स’नसनीपूर्ण खुलासा
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बला त्कारमैत्री कम्युनिस्ट : यौनजन्य काण्डमा फसेका ४ नेताको पद गुम्यो।
बला त्कारमैत्री कम्युनिस्ट : यौनजन्य काण्डमा फसेका ४ नेताको पद गुम्यो।
काठमाडौं – नेपालीको महान् पर्व विजया दशमीको अवसरमा देशभर हर्षाेल्लास छ । तर दशैंको मुखैमा भएको एउटा घटनाले दुई परिवारको खुशी बिथोलिएको छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीबीच रहेको सम्बन्ध पर्दाफास भएपछि दुवै परिवारको खुशी बिथोलियो । सभामुख महराको पद गुम्यो, रोशनीको पतिसँग सम्बन्ध टुट्यो ।
सभामुख महराले आफूमाथि यौनजन्य दु र्व्यर्व हार गरेको भनेर रोशनी शाही मिडियामा आइन्, महरालाई कारवाहीको माग गरिन् । महरामाथि सरकारले तत्काल एक्सन लिएन । जसका कारण रोशनीमाथि दबाब बढ्यो र उनले आफ्नो बयान फेरिन् ।
रोशनीले बयान जेसुकै गरेपनि निवर्तमान सभामुख महरा राति र क्सीको बोत्तल लिएर महिला एक्लै भएको अवस्थामा डेराभित्र पसेको र एक घण्टाभन्दा बढी समय बिताएको पुष्टि भइसकेको छ । महराको दु र्व्यवहार प्रतिवाद गर्दा शाहीको शरीरमा चोटपटक लागेका निलडाम समेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
आरोप लागेको केही घण्टाभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले महरालाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । उनको सभामुख पद गुम्यो । । सभामुख पदबाट राजीनामा दिने बित्तिकै रोशनीमाथि गरिएको दुर्व्यवहार माफ भएको हो ? संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसामु यो गम्भीर प्रश्न छ ।
नेकपा सरकारमा उन्मुक्ति पाउने महरा मात्रै पहिलो नेता होइनन् । उनी यौनकाण्डमा मुछिएका हालसम्मकै सर्वाेच्च कम्युनिस्ट नेता भने हुन् । उनी ‘सम्माननीय’ दर्जामा रहँदारहँदै रक्सीको बोत्तल बोकेर एक्ली महिलाको डेराभित्र छिरे । जसले उनको पद गुम्यो ।
प्रदेश ३ सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री केशव स्थापित समेत यस्तै यौनकाण्डको आरोपमा विवादित बनेपछि पदमुक्त भए । उनको मन्त्री पद त गुम्यो । तर उनलाई कुनै कारवाही भएन । उनले पनि उन्मुक्ति पाए । स्थापितले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा एक जना कर्मचारीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको सन्दर्भमा उनी पदमुक्त भएका थिए ।
स्थापितले मेयर हुँदा आफूलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै पत्रकार रश्मिला प्रजापतिले सामाजिक सञ्जालमा ‘मि टू अभियान’ अन्तर्गत उनलाई गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसपछि स्थापितको मन्त्री पद गुमेपनि उनलाई यौन दुर्व्यवहारको सजाय स्वरुप कुनै कारवाही भएन । उनी हाल समेत प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले गत मंसिरमा यस्तै यौनकाण्डमा फसेर पद गुमाउनुपर्‍यो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर अर्कै प्रेमिका बनाएर उनीसँग विवाद परेको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै सुनेपछि उनलाई बर्खास्त गरियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका सोडारीलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको भएपनि उनको प्रदेशसभा सदस्य पद हालसम्म कायमै छ । उनलाई समेत यौन काण्डमा कुनै कारवाही भएन । कम्युनिस्ट सरकारको आडमा सांसद पद जोगाउन उनी सफल भए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुअघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट कृषिमन्त्री बनेका थिए हरिप्रसाद पराजुली । उनले समेत यौनजन्य दुर्व्यवहारमा फसेपछि २०७२ असारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । रोपाइँ महोत्सव मनाउने क्रममा स्थानीय महिलामाथि अस्लिल हर्कत गरेपछि उनी विवादमा आए र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
तत्कालीन मन्त्री पराजुलीका क्रियाकलाप ठीक नभएको भन्दै एमाले नेता र भातृ संगठनका कार्यकर्ताले चर्काे विरोध गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । पराजुलीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर दुर्व्यवहारवापत उनलाई कुनै कारवाही भएन ।
सर्वसाधारण जनतालाई सामान्य आशंकामा पक्राउ परेर थुनामा राख्ने कम्युनिस्ट सरकारले पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि महरालाई कुनै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन । ती पी डित महिलाले बयान फेरिन्, उनलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको प्रस्ट भइसकेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको आडमा महराले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
महरा सांसद पदमा कायमै छन् । यति मात्रै नभई उनी कानूनी रुपमा दोषी नदेखिएका भोलि फेरि सभामुख बन्न सक्ने वा कुनै आकर्षक पद पाउने अवसर खुला नै रहन्छ । अर्काेतिर आफूले व्यक्त गरेका पीडा अनुसार महरालाई कारवाही नभएपछि पीडितले झन् विक्षिप्त हुनुपरेको अवस्था छ । अहिले पी डितले आफ्नो विक्षिप्त अवस्थालाई सार्वजनिक समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विभिन्न घटनामा कम्युनिस्टले आफ्ना कम्युनिस्ट नेतालाई कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिनुले कम्युनिस्टहरूको बला त्कारमैत्री चरित्र उदांगो भएको छ । जनताले विश्वास गरेर सत्तामा पुर्‍याएका कम्युनिस्टका व्यवहारले मतदातामाथि गम्भीर धोका भएको छ ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हबत्यारा लाई सरकारले खोज्न नसकेको तितो यथार्थ जनताको मनमनमा गढेको छ । यति नै बेला सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बला त्कारका घटना भइरहन्छन् भनेर दिएको अभिव्यक्ति देशभर आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । सरकारले नै बला त्कार गर्नेलाई सहज हुने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको र कानूनी कारवाही नगरेको देखिएको छ ।
भर्खरै भुकम्प गयो केन्द्रबिन्दु गोरखा र लमजुङ को सिमा
राजा कस्को जनताको भन्दै हजारौ ले राजाको हातबाट टीका लगाए (भिडियो हेर्नुहोस )
फेरि अर्को घुस कान्डका कर्मचारीले गरे आ*त्मह*त्या
भर्खरै पाल्पाबाट आयो दुखद खबर
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा बोलिन् रेनु दाहाल (विज्ञप्तिसहित)
रबि लामिछानेलाई भेटेपछि भरतपुरकी उपमेयर मिडियामा आएर भनिन्, ‘रविलाई पक्राउ गरि भित्र राख्न जरुरि छैन’ बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ! रवि भागेर जाने मान्छे होइन (भिडियो)
अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गर्नेलाई कार्वाही हुन्छ’
पत्रकार टेकनारायण भटराइले रबिसग हिरासतमै लिए अन्तरबार्ता (पूरा हेरि शेयर गरौ )